टिकटकबाट यसरी कमाउनुहोस् पैसा, कति क्वाइनको कति डलर आउँछ ? – Khabarhouse
टिकटकबाट यसरी कमाउनुहोस् पैसा, कति क्वाइनको कति डलर आउँछ ?
Khabar house | ९ मंसिर २०७७, मंगलवार ०१:५५ | Comments
काठमाडौ । पछिल्लो समय निकैनै लोकप्रिय बनेको भिडियो एप ‘टिकटक’ले युवापुस्ता देखि वृद्ध वृद्धालाई आकर्षित गरेको छ । छोटो भिडियो निर्माण गरेर आफ्नो प्रतिभालाई समुदायमा देखाउन सकिने टिकटकलाई धेरैले मनोरञ्जनको रुप मा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् ।म्युजिकलि नामको एपलाई चिनियाँ कम्पनीले किनेर टिकटक नामाकरण गरेर सञ्चालनमा ल्याएपछि यस्को प्रयोगकर्ता ह्वात्तै बढेको हो ।
गतबर्ष सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको एपहरुको तुलनामा टिकटक शिर्ष स्थानमा रहेको थियो ।त्यस्तै टिकटकको प्रयोगकर्ता नेपालमा पनि दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। पछिल्लोसमय टिकटकबाटै आफ्नो पहिचान बनाएर सेलिब्रेटी बन्ने पनि लहर चलेको छ नेपालमा । धेरै टिकटक प्रयोगकर्तालाई यसबाट पैसापनि कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन होला ।
तर, पछिल्लो समय टिकटक मनोरञ्जनको लागि मात्र नभई पैसा कमाउन सकिने माध्यम पनि बनेको छ ।सेलिब्रेटी अर्थात चर्चित टिकटक प्रयोगकर्ताहरुले विभिन्न कम्पनिको बिज्ञापन गरेर प‌ैसा कमाइरहेका त छन् नै। तर टिकटक चलाए वापत सिधै खातामा रकम आउँने त्योपनि डलरमा कमाई हुन्छ । त्यो कसरी हामी तरिका सिकाउदैछौ ।
टिकटकमा अर्को फिचर पनि रहेको छ पैसा कमाउनको लागि । तपाईं सँग हजारभन्दा धेरै साथी जोडिनु भयो भने टिकटकमा लाइभ भन्ने फिचर देखिन्छ त्यसपछि तपाईंले फेसबुक , युट्युब, इन्स्टाग्राममा जस्तै लाईभ भिडियो गर्न सक्नु हुनेछ । लाईभ भिडियोमा जति मज्जाले कुरा गर्नुहुन्छ त्यति नै प्रयोगकर्ता आकर्षित हुनेछन् । टिकटकमा लाइभ गर्दा हेर्ने दर्शकहरुले इमोजी उडाउने र गिफ्ट फठाउन मिल्ने छ । गिफ्ट पठाउनलाई क्वाइन किन्नु पर्ने हुन्छ ।
क्वाइन किन्ने व्यवस्था नेपालमा नभएपनि विदेशीहरुले नेपाली प्रयोगकर्तापनि निक्कै क्वाइन वठाइरहेका छन् । उक्त क्वाईन तपाईले डलरमा साट्न सक्नुहुनेछ ।त्यो साट्ने व्यवस्था टिकटक स्वयंले गर्दछ । तपाईको अकाउण्टमा जम्मा भएको क्वाइनलाई डलरमा कन्भर्ट थिच्नासाथ तपाईको बैक खातामा पैसा आएर जम्मा हुन्छ । अरुले पठाएको गीफ्ट बापत लाइभ गर्ने ब्यक्तिको खातामा पैसा आइरहेको हुन्छ । यसरी पैसा कमाउन नेपालमा धेरैले सुरु गरिसकेका छन् ।